Ry zareo avy eo anivon’ny fikambanan’ny avara-pianarana Kristianina Advantista na ACAU no tompon’antoka tamin’izy ity. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanana, Andriniaina Tantely Olivier, tanora miisa 7 hatreto no sahy nampiranty ny tetikasany ka izay fikarohana hita fa mendrika dia hampian’ny fikambanana amin’ny fitadiavana mpamatsy vola. Ny olana eto amintsika, hoy ny Dr Joel Raveloharimisa, izay nanome fiofanana ho an’ireo tanora, dia manampahaizana ny tanora Malagasy na dia tsy voatery nandalo ambaratonga ambony aza, saingy tsy misy sehatra isokafany. Anton’ny andalovako eto Madagasikara ny hampiofana ny fomba ahitan’ny tanora manana tetikasa ivelomana famatsiam-bola sy ny paikady amin’izany satria samihafa ny fomba fandresen-dahatra mpamatsy frantsay na anglisy na espaniola, hoy izy. Ezahana hisy isaky ny 2 taona moa ity hetsika ity.